Football Khabar » २०२० मेस्सीका लागि फुटबलमा ‘इतिहास रच्ने’ वर्ष !
२०२० मेस्सीका लागि फुटबलमा ‘इतिहास रच्ने’ वर्ष !
यता, ३२ वर्षका मेस्सी अब पेलेको सो रेकर्डबाट मात्रै २५ गोलले टाढा छन् । र, मेस्सीले सो आँकडा २०२० मा पार गरेर पेलेको नामको दुर्लभ रेकर्ड भंग गर्दै आफ्नो नाममा लेखाउने छन् । मेस्सीले हालसम्म बार्सिलोनाका लागि सबैखाले प्रतियोगिताबाट कूल ६१८ गोल गरिसकेका छन् । उनले ७०५ खेलबाट ६१८ गोल गरेका हुन् ।
मेस्सीले जारी सिजनभित्रै २५ गोल गर्ने निश्चिप्रायः छ । यदि गम्भीरखाले चोटमा नपरे उनले सिजन २०१९–२० नसकिँदै पेलेको सो रेकर्ड भंग गरिसक्नेछन् । २०२० मा बार्सिलोनाले ला लिगाका २० खेल खेल्न बाँकी छन् भने बार्सिलोना च्याम्पियन्स लिगको अन्तिम १६ मा छ । त्यस्तै, कोपा डेल रे फुटबलमा मेस्सी खेल्ने हुँदा उनले जारी सिजन नै पेलेको रेकर्ड भंग गर्नेछन् ।
प्रकाशित मिति १३ पुष २०७६, आईतवार १९:२५